.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Softwares For Flash Song Creators !
Softwares For Flash Song Creators !
ခုနောက်ပိုင်း Flash Song လုပ်တာကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ တော်တော်များလာတာကို တွေ့ရပါတယ် ။
ဟိုအရင်တုန်းကတော့ Double Tun ရဲ့ Multiply ဆိုဒ်မှာ တင်ပေးထားတာတွေ တော်တော်စုံပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်း
သူတင်ပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ၊ Effect တွေ၊ Ebook တွေ၊ Video ဖိုင်တွေ အားလုံးလိုလို လင့်ပျက်ကုန်ပါပြီ။
ခုတော့ ကျွန်တော် Flash Song ဖန်တီးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် SWiSH Max ဆော့ဝဲလ်တွေနဲ့ Effect တွေ၊
Double Tun တင်ပေးထားတုန်းက ဒေါင်းခဲ့တာလေးတွေ အားလုံးကို အသစ် ပြန်လည် Upload တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
သွားရောက် ဒေါင်းယူရမယ့် ဆိုဒ်လင့်ကတော့ http://flashsongcreators.blogspot.com ဖြစ်ပါတယ်...။
ဒီ Web Page လေး ဖြစ်လာဖို့ ဆော့ဝဲလ်တွေ Upload တင်ရတာနဲ့ စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်အောင် အချိန်တော်တော်
ပေးပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ Flash Song ဖန်တီးနေသူတွေ ဒီ Web Page ကို အချိန်မရွေး လာလို့လွယ်ကူအောင် ကျွန်တော်
Internet Shortcut လေး လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းယူပြီး စက်ထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ပေါ့နော်။ လာချင်ရင် ၂ ချက်ကလစ်ရုံပါပဲ။
Download: Softwares For Flash Song Creators ! [ Internet Shortcut ]
Posted by Thurainlin at 09:49
Labels: Effect, Software, နည်းပညာ, အသိပေးခြင်း